Warbaahinta iyo Doorka ay ka Qaadatay Dagaalkii Ciraaq | Berberanews.com
Home WARARKA Warbaahinta iyo Doorka ay ka Qaadatay Dagaalkii Ciraaq
Warbaahinta iyo Doorka ay ka Qaadatay Dagaalkii Ciraaq
Berberanews-Sanadkii 2003-dii duulaankii lagu qaaday dalka Ciraaq ayaa taageero laxaad leh ka helay inta badan warbaahinta reer galbeedka. Dhacdadii 11-kii September,2011 ee lagu baabi’yey daarihii ganacsiga aduunka oo dad ka badan 3000 (saddex kun) oo qof ay ku dhinteen ayaa waxay noqotay mid siisa madaxweynihii Maraykanka ee xiligaasi ee George W. Bush taageero laxaad leh taasi oo ka imanaynaysa shacabka Maraykanka iyo warbaahinta. Warbaahinta ayaa si dhib yar u aamintay sheegashooyinkii Maamulka George W. Bush ee ahaa inay Ciraaq samaysanayo Hubka aadka wax u Burburiya (Weapons of Mass Destruction (WMD)).
Markii Dagaalkii Ciraaq uu dhamaaday ee khasaare badan oo naf iyo maalba leh uu soo gaadhay labadii dhinac ee dirirtu ka dhaxaysay ayaa la ogaaday in aanu jirin wax hub ah oo ay Ciraaq samaysatay ama ay samaysanaysay.Waxa adkaatay in Dimuqraadiyad laga beero Ciraaq xilli ay rabshaduhu cirka isku shareereen taasi oo aan ilaa maanta la ogeyn xilliga ay dadka reer Ciraaq goosan doonaan midhaha Dimuqraadiyada uu Maraykanku u beeray.
Warbaahinta ayaa iyadoo ka aargoosanaysa Majarahabaabinta uu u geystay Maamulka George W. Bush ee ay sida dhibta yar u qaateen taas badalkeed mar keliya isku wada rogay kuwo ku mucaarid ah Dagaalka uu Maraykanku ka galay Ciraaq. Maamulkii George W. Bush oo markii hore la dhacsanaa doorka warbaahinta ee ololaha dagaalka Ciraaq ayaa ku eedeeyey warbaahinta adduunka iyo Maraykankuba inay marin habaabinayso shacabka Maraykanka iyo ra’yul caamka guud.
Haddab Suaashu waxa weeyaan ma warbaahinta ayaa sabab u ahayd taageeradii hoos u dhacday ee loo hayay Dagaalka Ciraaq? Sida uu sheegayo Saynisyahanka John Muller ee ku takhasusay Cilmiga Siyaasada ayaa sheegay in intii lagu gudo jiray Dagaalkii Kuuriya (1950-1953), Dagaalkii Fiitnaam (1965-1973) iyo Dagaalkii Ciraaq ee bilawday sanadkii 2003-dii in dadweynaha Maraykanku ay taageereen gelista dagaaladaas bilawgii saddex meelodow lab meelood (2/3). Laakiin markii dagaaladaasi socdeen muddo saddex sanadood ah gudahood ay taageeradii loo hayay dagaaladaasi hoos u dhacday wax ka yar saddex meeloodow hal meel ( 1/3). Dagaalkii Kuuriya ahaa ayaa ahaa mid dhacay xilli aanu hano qaadin Telifishanka oo lagu tilmaamo warbaahinta nool ee ugu xooga weyn noocyada kala duwan ee warbaahinta isla mar ahaantaas aan aduunka intiisa badan laga aqoon, sidaas awgeed warbaahinta oo keli ah laguma eedayn karayo hoos u dhaca taageerada loo hayay dagaaladaas. Waqtiga ay socdeen dagaaladaasi iyo khasaarihii isa soo tarayey ee ay sababayeen ayaa inta badan loo eedeeyaa. Shacabka Maraykanka ayaa ay Dhaqan ahaan ah kuwo aan jeclayn dagaalada daba dheeraada sida ay sheegayaan warbixino lasoo ururiyay. Fikradii ay ka haysteen dadka Maraykanku dagaalka Ciraaq ayaa is badashay markii Ciraaq laga waayay Hubka aadka wax baa’biiya (WMD).Milateriga Maraykanka ayaa weli ku eedeeya warbaahinta buunbuuninta khasaaraha Dagaalka Ciraaq.
Sanadkii 2003-dii Suxufiyiinta ayaa kasoo warameyey Cutubyada ciidamada Maraykanka dhexdooda iyaga oo markaas la socday kolba guuto ciidanka ka mid ah. Arintaasi ayaa jawi fiican waxoogaa ka dhex abuurtay suxufiyiinta iyo Militeriga maadaama ay suxufiyiintu ku tiirsanaayeen Militeriga Maraykanka si ay shaqadooda u qabsadaan. Arintan ayaan noqon mid soo jiidata dadka warbaahinta ka war qaata maadaama weriyayaasha la socda ciidamada Maraykanku ay soo gudbinayaan warar hal dhinac ah oo xaqiiqda waxa dhacaya ka fog. May jirin cid soo gudbinaysay bililiqadii iyo rabshadihii is watay ee mar keliya ka bilaw ciraaq. Waxa hoos u dhacay xiligaas ayaa la yidhaahdaa taageeradii,qadarintii iyo xishamadii loo hayay mixnada saxaafada.
Iyadoo arintu halkaas marayso ayaa waxa dadweynaha aduunka hor yimid sawiro ay qaadeen ciidamada Maraykanka askar ka tirsan oo muujinaya illaalada xabsiyada Maraykanka ee Ciraaq oo bahdilaad, jidh dil iyo farxumeyn kula kacaya Maxaabiis ciraaqiyiin ah. Sawiradas oo ay sii fidisay warbaahinta caalamku. Haddaba suaashu waxa weeyaan ma warbaahinta ayaa lagu eedayn karaa soo bixida sawiradaas?
Wargeysyada New York Times iyo Washington Post ayaa raali galin balaadhin ka bixiyey kana qoomamooday inay rumaysteen sheegashooyinkii Maamulka G.W. Bush.
Wixii intaas ka danbeeyay dhowr wargeys ayaa kasoo waramay qorshayaal sir ah oo argagaxisadda ka dhan ah oo Maraykanku watay. Maamulka George W. Bush ayaa ku hanjabay inuu wargaysyadaas la tiigsan doono xeerka basaasnimada (Espionage Act) ee Maraykanka. Wargeysyada ayaa ku dooday inay xaq u leeyihiin inay ogaadaan qorsheyaashaasi xaga uu Maamulka George W. Bush ka sheegay inay saxaafadu dhaawacaysyo qorshaha la dagaalanka argagixisadda arrintaasi oo sababtay inay gorodda isla galaan saxaafada iyo aqalka cad ee Maraykanka looga arimiyo.
Sanadkii 2006-dii ayaa ay caan noqotay in dadka wargeys-yada reer galbeeka wax ku qoraa gaar ahaan jamhuuriyiinta qunyar socodka ahi ay sheegaan in Maamulka George W. Bush uu dhiiqo cagaha kula jiro isla mar ahaantaas uu Ciraaq ku baabiyey wixii Maraykanku naf iyo maalba lahaa.
Waxa la ogaaday in aanay jirin hab lagu maamulo warbaahinta oo sax ah oo la isku raacsan yahay. Waxa dhab noqotay in ugu danbaynta runtu cadaato ama warbaahinta ha ka been sheegto waxa dhacaya ama dhinacyada laga soo waramayaaye. Warbaahinta ayaa caan ku ah inay u shaqeeyaan sida kubbad gidaar lagu laagay oo dabadeeto kasoo booda gidaarkaas sababta oo ah waxay warbaahintu bilawga xoogga saartaa sheegashooyinka dhinacyada is haya mid ka mid ah aakhirkana waxay ka soo waramaan xaqiiqda meesha taal.
Qasim Jama Hirsi
Previous articleSuuriya oo ku gacansaydhay Qorshe dalalka Carbeed damacsanyihiin inay Ciidammo ugu diraan
Next articleCiidanka Qaranka ee ku Sugan Buuhoodle iyo Malleeshiyo Dib isu Urursanaysa oo Madaafiic Iswaydaarsaday